Shiinaha DIN 125 Flat washer carbon steel zinc plated saarayaasha iyo alaabada | Fiilooyinka Tianbang
Shayga Dhaqe Flat; Dhaqe Bannaan
Wax soo saarka ugu muhiimsan DIN125 DIN9021
Ereyada muhiimka ah Dhaqe wareega ah
Waxyaabaha Birta kaarboon: Q195, Q235, 1035, 1045, 65Mn
Dhameyso Caddaan, Zinc oo la garaacay (Cad / Buluug / Jaale / Madow), madow, HDG, Dacromet
Xirmo 5kg 10kg 25kg boorso / kartoon + sariir ama la habeeyay.
Codsiga Warshadaha Culus, Warshadaha Tafaariiqda, Warshadaha Guud, Baabuurta
Tilmaamo badan oo ku saabsan dhaqeyaha guryaha
(1) Maxaa loogu talagalay maydhayaasha guryaha?
(2) Waa maxay farqiga u dhexeeya dhaqo fidsan iyo dhar dhaqe?
Mashiinka wax lagu dhaqo, in kasta oo uu qaab ahaan u eg yahay weelka caadiga, haddana wuxuu ku kala duwan yahay in dhexroorka banaanka dhaqan ahaan aad uga ballaaran marka loo eego godka dhexe. Naqshaddan, mashiinka wax lagu dhaqo ayaa la hoos dhigi karaa madaxa baaldiga ama lowska si looga caawiyo qaybinta xoogagga la adeegsaday markii la adkaynayay.
(3) Ma u baahanahay dhaqe guri oo leh quful quful?
Mashiinnada fidsan ayaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo aagga dusha sare si si siman loogu qaybiyo xoogga la adeegsado adkaynta dhejiska. Maydhayaasha qufulka ayaa loo adeegsadaa sidii loo abuuri lahaa xiisad inta lagu guda jiro adkeynta si looga ilaaliyo lowska in uusan shaqeyn dabac dambe.
(4) Maxaa dhaqaa dhaqe qufulka hore ama makiinada fidsan?
Markii si sax ah loo isticmaalo, mashiinka qufulka ayaa meeshiisa ku hay lowska ama dhajiska kale ee dunta leh. Si aad uga caawiso inay ku guuleysato tan, dhig qolka qufulka marka hore, ka hooseeya dhejiyaha. Haddii mashruucaagu u yeero maydhayaasha kale ama walxaha qalabka, waa inay sii socdaan ka hor qufulka qufulka si ay meesha ugu hayn karaan.
Hore: Dhawaan Imaatinka Square Head Lag Bolts - DIN933 darajo bir fudud oo 4.8 Hex bolt - Tianbang Fasteners
Xiga: DIN933 darajo bir fudud oo 4.8 Hex bool
Maydhayaasha Flat-ka waaweyn
Dhagaha Dhagaha, Hex Socket Bolt, Hex Socket Head Bolt, Aargoosyada aasaaska aasaasiga ah, Barroosinka Hoolka Birta ee Cadaadiska ah, Bolt isku xidhka Nut,